‘हिमचितुवा’ आङरिता शेर्पाको निधन, यस्तो थियो उनको हिमाल आरोहण यात्रा:: Naya Nepal
‘हिमचितुवा’ आङरिता शेर्पाको निधन, यस्तो थियो उनको हिमाल आरोहण यात्रा
सोलुखुम्बु : विनाअक्सिजन १०औँ पटक सगरमाथा आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान कायम राख्न सफल आङरिता शेर्पाको निधन भएको छ। आज बिहान १० बजे उनको आफ्नै निवास काठमाडौँको जोरपाटीमा निधन भएको उनका आफन्त नुरछेपाल शेर्पाले जानकारी दिए।
सोलुखुम्बुको थामेमा जन्मेका ७२ वर्षीय ‘हिमचितुवा’को पार्थिव शरीर अहिले शेर्पा गुम्बामा लैजाने तयारी भइरहेको छ। बुधबार बौद्धधर्मानुसार दाहसंस्कार गर्ने तयारी गरिएको छ। उनले सन् १९८३ देखि सगरमाथाको आरोहण शुरु गरेका थिए। सन् १९९६ मा विनाअक्सिजन सगरमाथामा पाइला टेकेका शेर्पाको त्यो अन्तिम आरोहण थियो। सर्वोच्च शिखर सगरमाथा मात्रै नभई विनाअक्सिजन नै पाकिस्तानको माउन्ट केटु तथा नेपालका चोयु, मनास्लु, ल्होत्से, अन्नपूर्ण, धौलागिरिलगायत दर्जनौँ हिमालको उनले पटकपटक आरोहण गरेका थिए।
सन् १९४८ मा जन्मेका आङरिताको पुख्र्यौली पेशा चौरीपालन भए पनि १५ वर्षकै उमेरदेखि आरोहणमा लागेका थिए। पहिलो पटक करिब २० वर्षका उमेरमा चोयु हिमालको आरोहण गरेका शेर्पाले विनाअक्सिजन पहिलो पटक १९८३ मा सगरमाथा चुचुरामा पाइला टेकेका थिए।
आरोहणका क्रममै बिरामी भएपछि उनको आरोहण यात्रा रोकिएको थियो। सगरमाथा आरोहणमा नजानाको मुख्य कारण उनी बिरामी भएका बेला तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले युवराज दीपेन्द्रलाई घरैमा भेट्न पठाएका थिए। गोपीकृष्णस्थित भाडाका कोठामा बसेका शेर्पालाई भेट्न आएका दीपेन्द्रले ‘बुबा (वीरेन्द्र) ले आरोहणबाट सन्न्यास लेऊ भन्ने हुकुम भएको छ,’ त्यसपछि उनी आरोहणमा नगएको परिवारको भनाइ छ।
त्यसबेला राजा वीरेन्द्रले चाहना र आवश्यकता के छ भनेर सोधे पनि आफूले केही पनि चाहना व्यक्त नगरेको आङरिताले पत्रकारसँगको भेटमा भन्ने गरेका थिए। सन् १९९६ तिर दीपेन्द्रले “दरबार आउनू” भनेको भए पनि दरबार नगएको बताउने शेर्पा नेपाल सरकारबाट त्यसबेला त्रिशक्तिपट्ट, गोरखा दक्षिणबाहु जस्ता तक्माबाट भने सम्मानित भएका थिए।
नेपालको नाम विश्वभरि फैलाउन सफल आफूलाई भारत सरकारले उतै बस्न व्यवस्था मिलाइदिने प्रस्ताव राखे पनि नगएको बताउने शेर्पालाई नेपाल सरकारबाट भने खासै सहयोग प्राप्त नभएको उनकी छोरी डोमाले बताइन्।
यद्यपि उनको आर्थिक अवस्था दयनीय भएको जनाउँदै नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले नियमित सहयोग गर्दै आएको छ। छोरीका अनुसार पर्वतारोहण सङ्घले मासिक रु १५ हजार दिँदै आएको छ। आङरिताका तीन छोरा र एक छोरी छन्। जेठ छोरा कर्साङ आरोहण पेशामै छन्। माहिला छोरा छेवाङ दोर्जे भने अमेरिकामा छन् र कान्छा छोरा फुरानुरु खुम्बुमै छन्। छोरी डोमा जोरपाटीमा छिन्। आङरिता उनै छोरीसँग बस्दै आएका थिए। सात वर्षअघि आङरिताकी पत्नीको निधन भएको थियो।
के बेइमानीका कारण दिल्लीसँग हारेको हो किंग्स ११ पञ्जाब?
१५८ रनको लक्ष्य पछ्याउँदै गरेको टिमको अवस्था कुनैबेला ५५/५ को थियो। फेरि एकजना ब्याट्सम्यानको उत्कृष्ट पारीका कारण अन्तिम दुई बलमा १ रनको आवश्यकताको स्थिति बन्न पुग्यो। तर, अन्त्यमा दुई बलमा रन जोड्न नसक्दा पराजय। यो सिनारियो हो किंग्स ११ पञ्जाब र दिल्ली क्यापिटल्सको गएरातिको खेलको। जसमा सुपर ओभरमा गएर दिल्लीले खेल जित्यो।
यद्यपि, सामाजिक सञ्जालमा पञ्जाबका समर्थकदेखि लिएर दिग्गज क्रिकेटरहरु पनि खेलको एउटा निर्णयलाई लिएर ‘बेइमानी’ भएको दाबी गरिरहेका छन्। उनीहरुको तर्क छ म्याचमा सुपर ओभरको आवश्यकता थिएन, पञ्जाबले निर्धारित ओभरमै खेल जितिसकेको थियो।
म्याचमा के भएको थियो? सुरुबाट हेर्दै जाउँ। पञ्जाबले टस जितेर दिल्लीलाई ब्याटिङको निम्ता दियो। दिल्लीले १५७ रन बनायो जसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण योगदान स्टोइनिसको रह्यो।
फेरि पालो आयो पञ्जाबको। पञ्जाब ५५/५ को अवस्थामा रहँदा म्याच हातबाट बाहिरिँदै गरेको देखिन्थ्यो। तर, ब्याट्सम्यान मयंक अग्रवाल डटिरहे र पारी सम्हाले। उनले म्याचलाई १६ ओभरसम्म ल्याए र ब्याटिङको गियर फेरे। १६ औं ओभर सकिँदा पञ्जाबलाई २४ बलमा ५३ रनको आवश्यकता थियो। १६ औं ओभरमा दुई बाउन्ड्री लगाएका मयंकले १७ औं ओभरमा दुई छक्का प्रहार गरे। हेर्दाहेर्दै पञ्जाबलाई १२ बलमा २५ रनको आवश्यकता पर्‍यो। खेल दिल्लीको हातबाट फुत्किएजस्तो देखिन थाल्यो।
त्यस्तै, १९ ‍औं ओभर लिएर रवाडा आए। मयंकले यस ओभरमा पनि २ चौका लगाउँदा खेलमा पञ्जाब पूर्णत हावी भएको देखियो।
यही ओभरको तेस्रो बललाई लिएर कन्ट्रोभर्सी भएको छ अहिले। रबाडाले तेस्रो बल गरे। मयंकले लङ अनको तर्फ प्रहार गरे र दौडिए। अर्कोतर्फ क्रिस जोर्डन पनि दौडिए। तर, जब उनले रन पूरा गरे फिल्ड अम्पायरलाई लाग्यो नि सायद जोर्डनले रन पूरा गरेनन्। त्यसैले उनले थर्ड अम्पायरलाई सोधे। थर्ड अम्पायरले यसलाई ‘सर्ट रन’ करार गरिदिए। अर्थात् रन आएन। तर, पछिको भिडियोमा भने रन पूरा भएको देखिन्छ। अन्तिम ओभरमा आएर १ रनकै कारण म्याच टाइ हुन पुग्यो। त्यसपछि त दिल्लीले सुपर ओभरबाट खेल जित्यो।
अम्पायरको यो निर्णयलाई लिएर पञ्जाबका फ्यानहरु त प्रश्न उठाइरहेका छन् नै दिग्गज क्रिकेटहरुले पनि प्रश्न गरिरहेका छन्। भारतीय क्रिकेट टिमका पूर्व सदस्य वीरेन्द्र सहभागले आफू त्यो निर्णयसँग सहमत नभएको भन्दै त्यो रन सर्ट रन नभएको दाबी ट्वीटरमार्फत् गरेका छन्।
त्यस्तै, अर्का भारतीय क्रिकेट टिमका पूर्व सदस्य इर्फान पठानले पनि ‘सर्ट रन’ लाई लिएर प्रश्न उठाएका छन्।